China BA insimbi engagqwali ikhoyili Ukwakha futhi Factory | I-Huaxiao
Indawo ye-BA isiphetho esikhethekile, njengokuqedwa kwesibuko kepha hhayi okukhanyayo ngokwanele ukusibuko. Ukufakwa okukhanyayo kubizwa nangokuthi ukuhlanganiswa okukhazimulayo, ukufaka imikhiqizo endaweni evaliwe kupholisa kancane okungenani ama-degree angama-500, bese yenza imikhiqizo ukupholisa kwemvelo kusesikhala esivaliwe, ngemuva kwalokho ukuthola ukukhanya nobuso obuhle, futhi ngaphandle kokubanga isimo se-decarburization.
Amandla we-Sino Stainless Steel mayelana nekhoyili yensimbi engagqwali ye-BA, i-Bright Annealing coil yensimbi engagqwali
Qeda: I-BA, i-Bright Annealing
Ifilimu: I-PVC, i-PE, i-PI, i-Laser PVC, i-20um-120um, iphepha elihlanganisiwe
Ubukhulu: 0.3mm - 3.0mm
Ibanga: 304 316L 201 202 430 410s 409 409L njll
Inhloso nokusizakala kokucutshungulwa kwekhoyili yensimbi engagqwali
1.Ukuqeda ukuqina komsebenzi, ukuthola isakhiwo se-metallographic esigculisayo. Lapho ukusetshenziswa kwezidingo zokusebenza ezahlukahlukene, ukwakheka okuncane kokukhanyayo okukhanyisiwe ngemuva kokufakwa kwesicelo kuhlukile, inqubo yokwelashwa ngokushisa okukhanyayo nayo yehlukile.
2.Ukufinyelela kokumelana nokugqwala okungaphandle kwe-oxide okukhanyayo. Njengoba ukufakwa okukhanyayo kushisa indawo yomkhiqizo ngaphansi komoya wokuvikela wenhlanganisela ye-hydrogen ne-nitrogen, indawo engenayo i-oxidized futhi ekhanyayo itholakala ngokulawula ngokuqinile umoya osesithandweni somlilo, ikakhulukazi, ubumsulwa, i-oxygen eyinsalela nephuzu lamazolo. Uma kuqhathaniswa nendawo etholwe nge-annealing ejwayelekile ne-pickling, indawo ephelelisiwe ye-chromium yomugqa iyancipha ngenxa yokungabikho kwenqubo ye-oxidation, futhi ukumelana nokugqwala kungcono kunaleyo yepuleti le-2B ngemuva kokupholisha.
3.Ukucubungula okukhanyayo Gcina ukuphela kwendawo egingqikayo, ngeke kusacutshungulwa ukuthola indawo ecwebezelayo. Ngenxa yokuncishwa okukhanyayo, ikhoyili noma ishidi ligcina ubukhazikhazi balo bensimbi futhi litholakale ngobuso obucwebezelayo eduze kwesibuko, lingasetshenziswa ngqo ngaphandle kweminye imishini, ngezidingo ezijwayelekile.
4.Ungenza iphethini ekhethekile yokugoqa iphethini noma ikhoyili. Njengenqubo yokuncishwa, akukho shintsho ebusweni bensimbi, indawo ingagcinwa ngokuphelele iphethini, ungakwazi ukuklama kalula umucu noma ikhoyili ekhethekile ebandayo.
5.akukho ukungcola okubangelwa indlela ejwayelekile yokukha. Ngemuva kokuhlanganisa umugqa awudingi ukukhiwa noma ukwelashwa okufanayo, ungasebenzisi izinto ezinhlobonhlobo zamakhemikhali njenge-acids, azikho izinkinga zokungcola okubangelwa ukutomula.
6.Ukufeza ukulawulwa kokuqina kwekhoyili yensimbi engagqwali. Ngoba ukwakheka kwesithando somlilo esikhanyayo kuvumela ukulungiswa kwesigaba esingaphansi kobubanzi besiqeshana noma ikhoyili, ukulawulwa okuku-inthanethi kweshidi kungabonakala ngokulungisa isilinganiso sokupholisa ekuqondeni kobubanzi bomugqa ngokuguquguquka komoya
Langaphambilini NO.4 ikhoyili yensimbi engagqwali
Olandelayo: Ikhoyili yensimbi engenasici